မော်တော်ကားလုပ်ငန်း - Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd.
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ဂီယာစနစ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် မီးတောက်များ၊ burrs, chamfers, machining knife marks, tooth surface roughness, fine polishing, etc., deburring နှင့် polishing လုပ်စဉ်အတွင်း အဖုအထစ်များ မရှိစေဘဲ စက်ယန္တရား အပြောင်းအလဲမရှိ၊ အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဂျီဩမေတြီအတိုင်းအတာများနှင့် ပစ်ချစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏ မြင့်မားသောတိကျမှုသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏ ဂီယာအရည်အသွေးကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေပြီး ဂီယာဆူညံသံကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ဂီယာအရည်အသွေးကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထောင့်မှန်ကို ပွတ်ခြင်းသို့ အမျိုးမျိုးသော တိကျသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ချေဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြေရှင်းပါ။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ-
1. အစိတ်အပိုင်းများ- အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက် (သို့မဟုတ်- လုပ်ဆောင်မှု) ကို သိရှိနားလည်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပေါင်းစပ်မှု။ အစိတ်အပိုင်းသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများစွာကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုတွင်၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် တည်ထောင်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက် (သို့မဟုတ်- လုပ်ဆောင်မှု) ကို သိရှိနားလည်သည့် အဓိကအပိုင်းဖြစ်ပြီး ကျန်အစိတ်အပိုင်းများသည် ချိတ်ဆက်မှု၊ ချိတ်ဆွဲခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်မှုကဲ့သို့သော အရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာ လုပ်ဆောင်သည်။
2. အစိတ်အပိုင်းများ- ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်၊ frame မှလွဲ၍ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် စုပေါင်းရည်ညွှန်းသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ထိန်သိမ်းသည်လည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
3. အစိတ်အပိုင်းများ- ခွဲ၍မရနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ။
အစိတ်အပိုင်းများကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များရှိသည်။ စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် အနည်းငယ် ဂရုမစိုက်ဘဲ အလုပ်ခွင်၏ အမှားအယွင်းသည် သည်းခံနိုင်မှုအတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်သွားစေရန်၊ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ကွက်လပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များသည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် ။ ပထမဦးစွာ၊ ပုံ၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အနေအထားသည်းခံမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များကို တင်းကျပ်စွာစီမံဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လုပ်ငန်းမှ ဆောင်ရွက်သော အစိတ်အပိုင်းများ၏ အရွယ်အစားသည် ပုံဆွဲအရွယ်အစားနှင့် အတိအကျ တူညီမည်မဟုတ်သော်လည်း အမှန်တကယ်အရွယ်အစားမှာ သီအိုရီပိုင်းအရ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခံနိုင်ရည်ရှိကာ ၎င်းသည် အရည်အသွေးပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးနောက် workpiece သည် ပြီးစီးမှုဖြစ်စဉ်ကို ကြုံတွေ့ရသောအခါ၊ ၎င်းကို ပိုမိုတိကျသောစက်ကိရိယာတစ်ခုပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သင့်သည်၊ သို့မှသာ လက်ရာသည် မြင့်မားသောတိကျမှုကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
အစိတ်အပိုင်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းတွင် မျက်နှာပြင် ကုသမှုနှင့် အပူကုသမှုတို့ ပါဝင်လေ့ရှိပြီး တိကျသော စက်ပြုပြင်ပြီးနောက် မျက်နှာပြင် ကုသမှုကို ထားရှိသင့်သည်။ တိကျစွာ ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မျက်နှာပြင် ကုသမှုပြီးနောက် ပါးလွှာသော အလွှာ၏ အထူကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အပူကုသမှုသည် သတ္တု၏ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သောကြောင့် စက်မပြုလုပ်မီ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို စိတ်တိုင်းကျ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းသည် စက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များနောက်တွင် ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော စက်ကိရိယာများဖြင့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း နှင့် ကောင်းမွန်စွာ စီမံဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကွက်လပ်၏ အစိတ်အပိုင်းအများစုကို ဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သောကြောင့် feed rate ကြီးမားပြီး ဖြတ်တောက်မှု အတိမ်အနက် ကြီးမားလာသောအခါတွင် အတွင်းပိုင်းဖိစီးမှု အများအပြားကို workpiece အတွင်းသို့ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
စံမဟုတ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၏ အားသာချက်များသည် ထိုနေရာတွင် ရပ်မနေပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှု၏ အားသာချက်မှာ သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များမှတစ်ဆင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည် လုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စက်ကိရိယာများကို လိုအပ်ချက်အလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့်၊ စမ်းသပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် အလုပ်သမားစရိတ်များ အလွန်လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ထုတ်ကုန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
စံမဟုတ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း လက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ဝယ်လိုအားက လွှမ်းမိုးထားသော စက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များသည် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်သင့်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများအတွက်၊ ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုမြှင့်တင်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြိုးပမ်းမှုများဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စံမဟုတ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၏ အားသာချက်မှာ လုပ်ငန်းများအား ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုအား လွတ်လပ်စွာ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စေသည့် စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်းသည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုအပေါ် စားသုံးသူများ၏ စွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ထုတ်ကုန်၏ စွဲဆောင်မှုအရည်အသွေးသည် စားသုံးသူများ၏ ဝယ်လိုအားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်များကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်နှင့် လက်ရာမြောက်သောထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုပါသည်။